Haruta & Chika ( 2017 ) - Myanmar Asian TV
2017 , March4မှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ Teen , Music & School Live Action ဇာတ်ကားလေးပါ ….
Haruta လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေး နဲ့ Chika လို့ခေါ်တဲ့ ကောင်မလေးက မူလတန်းအရွယ်ထဲက ခင်ခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပေါ့ ….
Haruta က ရုပ်ချောတယ် ဒါပေမယ့် ကြောက်တတ်တယ် … Chika ကျတော့ ထက်ထက်မြက်မြက် သွက်သွက်လက်လက် ရှိတယ်ပေါ့ …
မူလတန်းအရွယ်တစ်ရက်ကျတော့ Haruta တို့ မိသားစုက အိမ်ပြောင်းခဲ့ကြတယ် … သူတို့နှစ်ယောက် အထက်တန်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုမယ့် အတန်းရောက်တော့ ပြန်တွေ့ခဲ့ကြတယ် …
ထိုအချိန်မှာ Chika က ကျောင်းရဲ့တူရိယာအသင်းကို ပါဝင်ချင်နေတဲ့အချိန် …ခထိုအသင်းကလဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖျက်သိမ်းတော့မယ်လို့ ကြားသိခဲ့ရသောအခါ …
Chika တယောက်ပလွေကိုလဲ ဝါသနာပါနေတော့ အသင်းကိုပြန်ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုပြီး … ကျောင်းအုပ်ကြီးကိုတက်ပြောတဲ့အခါ … ကျာင်းအုပ်ဆရာကြီးက Chika ကို အချိန်သုံးလ ပေးပြီး လူ ( ၉ ) ယောက်ရအောင် စုစည်းနိုင်ရင် ပြန်တည်ထောင်လို့ရပြီလို့ ပြောခဲ့တယ် …
Chika ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး ဘယ်လိုတွေလူစုမလဲ ဆိုတာရယ် … သူတို့အသင်းကြီးပြန်တည်ထောင်ပြီး ပြိုင်ပွဲကို သွားရမလား ဆိုတာတွေကိုတော့ …
ဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်ရင်း အဖြေဆက်ထုတ်ကြတာပေါ့ … ဇာတ်လမ်းလေးက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးက ပေးသွားတဲ့ message လေးက ယူတတ်ရင် အတော်ကောင်းပါတယ် … Romance ခန်းရယ်လို့ မပါသလောက်ပါပဲ …
Rating အရ IMDb မှာ 5.8/10 နှင့် AsianWiki မှာ 89/100 အသီးသီးရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ …
Actors: Hiroya Shimizu, Kanna Hashimoto, Koki Maeda, Moka Kamishiraishi, Shori Sato, Takuma Hiraoka, Yuri Tsunematsu
Openload.co Myanmar650 MB Download Soliddrive.co Myanmar650 MB Download
Roတာလေးမှကြည့်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် 2017မှာထွက်ထားတဲ့ Healerဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်း​လေးကတော့ လူငယ်​သ​ဘောသဘာဝအရ ရှုတ်​တတ်​​ပွေတတ်​ပြီး ဘဝကို အပူအပင်​မရှိ လွတ်​လပ်​စွာ​နေ ​နေတဲ့ အဲလက်​စ်​…….. တစ်​​နေ့မှာ အ​ကြွေးကိစ္စနဲ့ ပြသနာ ရင်​ဆိုင်​​နေရတဲ့အခါ အရင်​က မရှိမကြားဖူးခဲ့တဲ့ ဦး​လေး တစ်​​ယောက်​​ပေါ်လာပြီး ပြသနာ ​တွေ​ဖြေရှင်း​ပေးသွားတဲ့အခါ…… ဦး​လေး ရဲ့​တောင်းဆိုချက်​​တွေကို မငြင်းနိုင်​ပဲ နယ်​မြို့​လေးတစ်​မြို့မှာ…
Trailer: Haruta & Chika ( 2017 )